Siyaasadda Qarsoonnimada - ExoSpecial
Markaynu joogno ExoSpecial, mid ka mid ah mudnaantayada ugu weyn waa sirta booqdayaashayada. Dukumeentiga Siyaasadda Qarsoonnimada ayaa ka kooban noocyada macluumaadka ee ay aruurisay oo ay duubtay ExoSpecial iyo sida aan u isticmaalno. Haddii aad su'aalo qabto, fadlan ha ka waaban nala soo xidhiidh.
Qaanuunkan Qarsoonnimadu waxay khusaysaa oo kaliya hawlaheena onlaynka ah waxayna ansax u tahay booqdayaasha websaydkayaga marka la eego macluumaadka ay wadaagaan iyo/ama ururiyaan ExoSpecial. Xeerkani maaha mid lagu dabaqi karo xog kasta oo lagu ururiyo offline ama kanaalada kale ee aan ahayn mareegahan.
Adigoo adeegsanaya bartayada internetka, waxaad ku ogolaaneysaa inaad ku ogolaato Nidaamkayaga Asturnaanta oo aad ogolaato shuruudaha.
Macluumaadka aan soo ururino
Aad ayey dhif u tahay isticmaalayaasha weydiisanaya macluumaad kasta oo gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, marka aanu samayno, macluumaadka shakhsiyeed ee lagu waydiiyo inaad bixiso, iyo sababaha lagugu waydiiyo inaad bixiso, ayaa laguu caddayn doonaa marka aan ku waydiino inaad bixiso macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed.
Haddii aad toos noola soo xiriirto, waxaa suuragal ah inaan helno macluumaad dheeraad ah oo adiga kugu saabsan sida magacaaga, cinwaanka emaylkaaga, lambarka taleefankaaga, waxa ku jira fariinta iyo / ama lifaaqyada aad noo soo diri karto, iyo macluumaad kasta oo kale oo aad dooran karto inaad bixiso.
Waxaan u adeegsanaa macluumaadka aan aruurino siyaabo kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Bixi, ku shaqee, oo sii wad boggayaga internetka
Hagaajinta, shaqsi ahaanta, iyo ballaarinta shabakadayada
Fahmitaan oo falanqee sida aad u isticmaasho degelkeena
Samee alaabooyin cusub, adeegyo, astaamo, iyo howl qabad
kula xidhiidh adiga, si toos ah ama mid ka mid ah shuraakadayada
Ku soo dir iimaylo, fariimo qoraal ah ama fariin jireed
Soo hel oo ka hortag been abuurka ama isticmaalka sharci darrada ah ee mareegahayaga
ExoSpecial waxay raacdaa nidaamka caadiga ah ee isticmaalka galalka log. Faylashani waxay galaan booqdayaasha marka ay booqdaan mareegaha. Dhammaan shirkadaha martigelinaya waxay sameeyaan tan iyo qayb ka mid ah falanqaynta adeegyada martigelinta. Macluumaadka lagu aruuriyo faylalka loggu waxaa ka mid ah ciwaannada borotokoolka internetka (IP), nooca browserka, Bixiyaha Adeegga Internetka (ISP), taariikhda iyo wakhtiga shaambada, boggaga tixraaca/ka bixista, iyo suurtogalnimada tirada gujisyada. Kuwaasi kuma xidhna wax macluumaad ah oo shakhsi ahaan la aqoonsan karo. Ujeedada macluumaadku waa falanqaynta isbeddellada iyo wanaajinta goobta.
Sida shabakad kasta oo kale, ExoSpecial waxay isticmaashaa 'cookies'. Ma waydiisanayno ogolaanshahaaga isticmaalka cookies-ka. Kukiyadan waxa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo macluumaadka ay ku jiraan dookhyada booqdayaasha, iyo bogagga mareegaha uu booqdehu galay ama booqday. Macluumaadka waxaa loo istcimaalaa in lagu wanaajiyo khibradaha isticmaalayaasha iyadoo la habeynayo waxa ku jira bogga shabakadda iyadoo lagu salaynayo nooca browserka booqdayaasha iyo/ama macluumaadka kale.
Waxaan u isticmaalnaa xayaysiis si aan uga faa'iidaysano ExoSpecial. Qaar ka mid ah xayaysiiyayaasha boggayaga ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan cookies iyo calaamado shabakadeed. Mid kasta oo ka mid ah shuraakadayada xayaysiisyada ayaa leh Siyaasadooda Qarsoon ee siyaasadahooda xogta isticmaalaha.
Shuruucda Gaar ahaaneed ee Xayeysiinta ah ee Xayeysiinta ah
Ogsoonow in ExoSpecial aysan lahayn marin u helid ama xakamaynta cookies-kan ay adeegsadaan xayaysiiyayaasha dhinac saddexaad.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee ExoSpecial ma khuseeyo xayaysiiyayaasha kale ama mareegaha internetka. Marka, waxaan kugula talineynaa inaad la tashato Siyaasadaha Qarsoon ee mareegahan qolo saddexaad si aad u hesho macluumaad faahfaahsan. Waxa laga yaabaa inay ku jirto hab-dhaqankooda iyo tilmaamo ku saabsan sida looga baxo doorashooyinka qaarkood.
Xuquuqda Asturnaanta ee CCPA (Ha Iibin Macluumaadkeyga Shaqsiyeed)
Marka loo eego CCPA, xuquuqaha kale dhexdooda, Macaamiisha California waxay xaq u leeyihiin:
Codso in meheradda ururisa xogta gaarka ah ee macaamilka ay shaaca ka qaado qaybaha iyo qaybo gaar ah oo xogta shaqsiyeed ee ganacsigu ka ururiyay macaamiisha. Codso ganacsigu inuu tirtiro xog kasta oo gaar ah oo ku saabsan macaamilka ee ganacsigu ururiyey. Codso ganacsiga iibiya xogta gaarka ah ee macaamilka, oo aan iibin xogta gaarka ah ee macaamilka.
Hadaad codsi sameyso, waxaan haysanaa hal bil oo aan kaaga jawaabno. Hadaad jeceshahay inaad isticmaasho mid ka mid ah xuquuqahan, fadlan nala soo xiriir.
Qayb kale oo ka mid ah mudnaantayada ayaa ah ku-darrida ilaalinta carruurta marka la isticmaalayo internetka. Waxaan ku dhiirigelinaynaa waalidiinta iyo mas'uuliyiinta inay fiirsadaan, ka qaybqaataan, iyo/ama la socdaan oo ay hagaan dhaqdhaqaaqooda onlaynka ah. ExoSpecial si badheedh ah ugama ururiso wax macluumaad ah oo lagu aqoonsan karo carruurta da'doodu ka yar tahay 13 jir. Haddii aad u malaynayso in ilmahaagu ku bixiyay macluumaadka noocan oo kale ah mareegahayaga, waxaanu si adag kuugu dhiirigelinaynaa inaad nala soo xiriirto si degdeg ah waxaanan ku dadaali doonaa inaan si degdeg ah meesha uga saarno macluumaadka noocaas ah ee diiwaankayaga.
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan siyaasaddan ama mid ka mid ah dhaqamadayada gaarka ah, fadlan la xiriir Privacy@exospecial.com goor kasta.